अलैँची खेतीमा सुनसरी : अलैँचीले बनायो गुजारा चलाउन सजिलो ! - Radio Bhotewodar
अलैँची खेतीमा सुनसरी : अलैँचीले बनायो गुजारा चलाउन सजिलो !
रेडियो भोटेओडार ७ माघ २०७७, बुधबार ११:३५ मा प्रकाशित ( १ साल अघि) १३९०३ पाठक संख्या
लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–८, पुरानो दुवरकी सुनसरी तामाङलाई विगतमा सामान्य घर–खर्च चलाउन पनि सकस थियो । चाडपर्व आउँदा खर्चको अभावले उहाँलाई पिरोल्थ्यो । बिरामी पर्दा पनि उपचारका लागि पैसाको उतिक्कै अभाव खड्कन्थ्यो । तर अहिले अलैँची खेती गरेपछि उहाँका यी समस्या बिस्तारै हल हुँदै गएको छ । अलैँची खेतीले उहाँको जीवनस्तर उकासिएको छ ।
‘पहिले त घरखर्च चलाउन समस्या हुन्थ्यो । चाडपर्व आउँदा खर्च अभावले चिन्ता लाग्थ्यो । आय–श्रोत नहुँदा कसैले दुई÷चार पैसा पनि पत्याउँदैनथेँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अलैँचीले चाडपर्व मनाउन, बच्चाहरु पढाउन, गुजारा चलाउन सजिलो बनाएको छ ।’
आफ्नो बाँझो, पाखो जमिनमा अहिले अलैँची लगाउनुभएको छ, सुनसरीले । वार्षिक साँढे २ क्विन्टल हाराहारीमा उहाँले अलैँची उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ । ‘१२ रोपनी जग्गामा अलैँची लगाइएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अलैँची राम्रै उत्पादन भइरहेको छ ।’
अलैँची खेतीमा सुन्सरीलाई श्रीमानको पनि साथ–सहयोग मिलेको छ । ‘हामी दुवै जना अलैँची खेतीमा लागेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । विगतमा उहाँहरुले मकै, कोदो लगाउनुहुन्थ्यो । मकै कोदोमा दुःख धेरै, उत्पादन कम हुने भएकाले उहाँहरुले अहिले मकै, कोदो खेती हुने जग्गामा पनि अलैँची लगाउनुभएको छ ।
‘मकै, कोदो खेती गर्दा दुःख धेरै हुन्छ । अलैँची खेतीमा त्यति धेरै दुःख हुँदैन । यसबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो , ‘सुरुका वर्षहरुमा भने अलैँची खेतीलाई स्याहार गर्नुपर्छ । सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
मकै, कोदो खेतीको तुलनामा अलैँची खेतीबाट कम लगानी, श्रममा धेरै आम्दानी लिन सकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘मकै, कोदोको तुलनामा अलैँचीको आम्दानी धेरै हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
तर पछिल्लो वर्ष अलैँचीको मूल्य घट्दा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ । विगतका वर्षहरुमा प्रति केजी २ हजारसम्म अलैँची बेच्दै आउनुभएकी उहाँले यसवर्ष प्रतिकेजी ५ सय रुपैयाँमा अलैँची बिक्री गर्नुभएको हो । ‘पहिले अलैँचीले राम्रै मूल्य पाएको थियो । अहिले अलैँचीको मूल्य घट्दै गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै, पुरानो दुवरकै मिनबहादुर तामाङले पनि व्यवसायिक रुपमा अलैँची खेती गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले विगत ३ वर्षदेखी अलैँची खेती गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले हाल २९ रोपनी जग्गामा अलैँची लगाउनुभएको छ । पछिल्लो समय अलैँचीको मूल्य घट्दै गएकाले अलैँची उत्पादक किसानलाई चिन्तित तुल्याएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
‘अलैँची खेती गरेपछि गुजारा चलाउन सजिलो त भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्ला वर्षमा अलैँचीको बजार मूल्य घट्दै गएको छ । यसले भने किसानलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।’
गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न ठाउँमा अलैँची खेती विस्तार हुँदै गएको, किसानहरुले यसैबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएको र अलैँचीले उनीहरुको जीवनस्तर उकासिएको दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।